QPR Oo Garoomada Ka Mamnuucaysa Taageerayaashii Shiidey Chelsea
HomeWararka MaantaQPR Oo Garoomada Ka Mamnuucaysa Taageerayaashii Shiidey Chelsea
Kooxda Queens Park Rangers ayaa sheegtay inay xayiraad garoomada ka saarayso shaqsiyaadkii kamidka ahaa taageeryaasheeda ee tuuryada hadhka kaga dhigay ciyaaryahanada Chelsea kulankii naadigaasi 1-0 ka guuldarada ah kala kulmeen The Blues Axadii.
Qasaacado iyo caagadaha sharaabka ayaa kamid ahaa walxaha garoonka lagu soo tuuray intii uu socday debaal degga goolkii Cesc Febregas ee yimid daqiiqadii 88 aad ee ciyaarta kaas oo ahaa ka guusha u horseeday kooxda Mourinho.
Kamaradaha garoonka ku dhex rakiban ee ‘CCTV footage” ka ah muuqaaladii ay duubeen ayay maamulka kooxda oo booliiska kaashanayaa dib u daawanayaan.
“Tani maaha dhaqanka naadiga , waxaanan u cambaaraynaynaa si kasta oo ay u dhaceen, qaab ama hanaan,” ayuu yidhi af-hayeen kooxda u hadlay.
“Wax dulqaad ahi naguma hadhin oo aanu ugu dulqaadanayno falka iyo dhaqanka noocan oo kale ah, haddii la cadeeyo dadkii ka dambeeyeyna, garoomada waan ka mamnuuci doonaa, talaabooyin anshax marin ahna waan ka qaadi doonaa, arintaas waxaan kala shaqayn doonaa ciidmada booliiska qaybta amniga garoomada.”
Kooxdu waxay sidoo kale sheegtay inay si dhaw ula shaqaynayso xidhiidhka kubada cagta wadanka Ingiriiska.
All Goals & Highlights – Liverpool 2-1 Everton
Arsenal vs Liverpool 3-3 All Goals & Highlights – Premier League